Ukuphupha iindevu zeNenekazi Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuthwala iindevu akuthethi ukuba kusefashonini kuphela, kodwa kwangaxeshanye, iinwele zobuso zikwangumqondiso wobudoda bakho, amandla, amandla kunye nokuzithemba. Kule meko, kuyaqondakala ukuba intshebe yomfazi ijongwa njengento ecekisekayo nengeyiyo eyoluntu kuluntu lwethu. Abasetyhini abaninzi abaneentshebe zamanenekazi abayithandi kwaye bayayisusa. Unobangela wale meko yendalo kunye nokusasazeka kwesiqhelo kuhlala kukuphazamiseka kwehomoni okanye imeko yemfuza.
Ukongeza kwinto yokuba kubomi bokwenyani abafazi abaninzi banengxaki yokuba iinwele ebusweni nasesifubeni ziyabonakala, iindevu zenenekazi nazo zinokudlala indima ekutolikeni amaphupha. Kungenzeka ukuba ephupheni ibhinqa elinentshebe libonwa, okanye umntu ochaphazelekayo ngokukhawuleza unayo. Anokutolikwa njani la maphupha?
1 Uphawu lwephupha «inenekazi iindevu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inenekazi iindevu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iindevu zenenekazi» - ukutolika okungokomoya
Uphawu lwephupha «inenekazi iindevu» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwitoliki yamaphupha, intshebe ihlala ifanekisela amandla kunye nobudoda. Ibonisa impumelelo kunye nokuzithemba kwaye inokubonisa ubulumko. Kwelinye icala, intshebe yomfazi kufuneka itolikwe ngendlela eyahlukileyo, ukuba kungenxa yokuba kuluntu lwethu, ngokungafaniyo neendevu zendoda, kujongwa njengokubi.
Ukuba umfazi ubona omnye umntu eneentshebe zamanenekazi ephupheni, oku kunokuba kuhle. i-nostalgia bonisa emva kweqabane eliyindoda. Lo mntu kuthethwa ngaye ufuna indoda esecaleni kwakhe eyomeleleyo nekuya ngaye. Kungenzeka ukuba uswele ukhuseleko kunye nokhuseleko ebomini bokwenyani, ukuba uwedwa rhoqo kwaye kufuneka usombulule iingxaki zakho ngaphandle kwenkxaso.
Iindevu zeli nenekazi zinokubonisa ukuba ihlupheka kangakanani kule meko. Kukwanjalo nakumaphupha apho umntu ochaphazelekayo ngequbuliso enentshebe. Oku kufanekisela iimvakalelo zakho, kuhlala kubomi bemihla ngemihla. "Kufuneka axhase umyeni wakhe", Oko kuthetha imvakalelo yokuba kufuneka anyamekele yonke into ngokwakhe kwaye athathe inxaxheba kwinxalenye yobomi bakhe angathanda ukuyidlulisela emntwini.
Nangona kunjalo, ukuba indoda iphupha ngokubona umfazi eneendevu zelinenekazi, oku kubonisa umfazi obalaseleyo kubomi bokwenyani bomntu ochaphazelekayo. Kwixesha elizayo elingekude, kufuneka uziphathe ngononophelo kwaye ulumke ngokubhekisele kwabasetyhini, kuba kungenjalo usongela ukuba nomsindo kunye nenenekazi.
Kwangelo xesha, isimboli ephupheni lomntu inokuba yeyakho iinkumbulo ezimbi kwaye iimvakalelo zibalulekile njengoko zibonisa isifo. Nangona kunjalo, ukuze isifo sinokwenzeka, ezinye iisimboli zamaphupha kufuneka nazo ziqulathe le nkcazo.
Uphawu lwephupha «inenekazi iindevu» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwesimboli yamaphupha kuyahambelana ngokwasengqondweni nakwimbono ngokubanzi: nakweli nqanaba, iindevu zenenekazi kwiphupha lomfazi zibonisa ukulangazelela iqabane elomeleleyo khu seleko kwaye ubeke ukhuseleko.
Kwiphupha lomntu, ukwamele enye Inenekazi eliqinisekileyo kubomi bomphuphi omlawulayo kwaye bobona buntu bunamandla kulwalamano.
Uphawu lwephupha «iindevu zenenekazi» - ukutolika okungokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokutolika, intshebe yenenekazi iboniswa ephupheni. amandla eyindoda a.